Xog Cusub oo laga helay Shirka Jowhar iyo Odawaa oo Waji Cusub lasoo baxay. | Gaaloos.com
Home » News » Xog Cusub oo laga helay Shirka Jowhar iyo Odawaa oo Waji Cusub lasoo baxay.
Xog Cusub oo laga helay Shirka Jowhar iyo Odawaa oo Waji Cusub lasoo baxay.
Maamulka Shabeelaha dhaxe ayaa bilaabay in uu si kulul kaaga hadlo fowdada iyo jahawareerka shirka jowhar iyadoo beelo miisaan culus leh ay shirkaasi ka baxeyn.
Guddoomiye ku-xigeenka dhinaca dib-u-heshiisiinta iyo Federaalka ee Maamulka Gobolka Shabeelaha Dhexe, Abuukar Cali Maqaneey ayaa sheegay in maamulka qudhiisa uusan ku raali aheyn qaabka ay Dowlada Somalia, gaar ahaan Wasaarada arrimaha Gudaha u wado shirka ka socda magaalada Jowhar.
Abuukar Cali Maqaneey , ayaa sheegay in maalinba maalinta xigta uu ajandaha shirka faraha kasii baxaayo, waxa uuna tibaaxay in Wasaarada arrimaha Gudaha looga baahan yahay inay ka fiirsato waxyaabaha burinkara hanaanka uu iminka u socdo shirka.
Gudoomiyaha waxa uu sidoo kale xusay in Beelaha shirka ka qeyb galaya ay weli ku qanci la’yihiin dadka ay u soo xushay Wasaaradda Arrimaah Gudaha iyo Federaalka in ay soo Magacaabaan Ergooyinka shirka ka qeyb galaya.
Rajo xumida ayuu sheegay inay ka dhalatay qaabka loo soo xulay Ergooyinka iyo Ajandaha looga hadlaayo shirka socda, isaga oo dhaliishaasi dusha u saaray Wasiirka arrimaha Gudaha iyo Federaalka C/raxmaan Odawaa.
Title: Xog Cusub oo laga helay Shirka Jowhar iyo Odawaa oo Waji Cusub lasoo baxay.
Posted by galmada Net, Published at 9:05 PM and have 0 comments